Psychic Tendencies uye Kubudirira
Kune marudzi mana emafiziki. Iyo yemukati psychic inosvika kune yemweya mweya-varume nemweya-madzimai, kurara ne incubi uye supubi uye kuita kuti muviri wake uchengetedzwe. Iyo psychral psychic inoitika uye inoshandisa yakaderera psychic mauto. Psychic yepfungwa inosvika munzvimbo yepamusoro yepfungwa, asi zvemweya chete ndiye anoziva uye ane masimba ekuporofita uye simba rekuda.
Vol. 7 JUNE, 1908. Nha. 3
PSYCHIC TENDENCies uye KUSVIRA.
EPIDEMICS yemarudzi akasiyana anoonekwa muzera rega rega. Denda rakawanda rakatishanyira, pakati pavo chirwere chepfungwa. Denda repfungwa rinovapo apo vanhu vazhinji munharaunda vanopa zvakare kune iro rechimiro chemunhu iro rinoteedzera kune zvisinganzwisisike uye vanobata nenyaya dzakadai semavese, kutaurira rombo rakanaka, zviroto, zviratidzo, kutaurirana nezvisikwa zvepasi zvisingaonekwe, uye nekutaurirana nekunamata kwevakafa. Idzi hosha, sekumwe kufamba, dzinouya nemijuru kana mafungu. Kana ivo vachiri pasi munzira kunooneka kujairika pakati pevanhu kukudziridza semutambo kana sekudzidza psychology uye psychology. Vanhu vakasiyana, mamiriro akasiyana emamiriro ekunze, nharaunda uye kutenderera kwacho chaiko kana nguva yenguva inoburitsa zvikamu zvakasiyana zvepfungwa.
Nekuda kwekushandurwa kwemazuva ano kwepfungwa yesainzi, iyo kudzidza kwehunyanzvi hwepfungwa, sainzi yemweya, yakadzorwa uye chero mazano ekuti ave neayo, kuvandudza kana kuita zvinodiwa pakudzidza nezvepfungwa dzemidzimu zvakaraswa nepfungwa yesainzi. nekuseka uye kuseka. Kana mumwe aive nemweya wepfungwa, kana achitenda mukukura kwavo, aionekwa nevakaoma kufunga kuti angave munyengeri, munyengeri, kana kusagadzikana mupfungwa kana benzi. Uye vamwe vevanofunga zvakapusa vaifara kuti vaiongororora Psychology nepfungwa havana kunge vakasimba zvakakwana kuti vamire vachipokana nezvombo zvekuseka nekuzvidza, sekushandiswa kwavakaitwa nevamwe vavo.
Asi kutenderera kwave kutendeuka. Pfungwa yesainzi ine hukasha hwakanyanya hwakatanga kuongorora hunyanzvi hwepfungwa huri mumurume. Ino ndiyo fashoni yekuti vanhu vabatwe nepfungwa: kuona, kunhuwa uye kunzwa zvinhu zvinoshamisa, uye kuti vanzwe kusvetuka uye kudzvinyirira. Uku kukurumidza kuita kubva kuzvinhu zvemazuva ano zvekunyanya kuda zvinhu, asi zvakanyanya nekuda kwemwaka, kutenderera kana nguva yenguva yatapinda. Kutenderera uku kuri kuita kuti nhengo yemuviri yemunhu iwedzerwe nehunhu hunobva kune zvisingaonekwi zvepasi pano zvinotenderera uye zvichizadza nyika yedu yenyama, kunyangwe nyika idzi dzakangoita sezvaivapo zvisikwa zvemunhu zvaive zvichiteerera kwavari.
Kwemakore apfuura pfungwa dzemunhu dzave kufunga nezvezvinangwa uye zvinhu izvo zvave zviri zvinhu zvavo mumhando yavo; asi kubvira parutivi rwekupedzisira rwegumi nemapfumbamwe century pfungwa dzakatungamirwa kumitsara mitsva yemafungiro, kune zvitsva zvibodzwa uye zvishuwo. Izvo zvakataurwa kuti kune nyika dzepamberi dzisina kufungwa idzo dzingazarurirwa munhu. Zvave zvichiratidzwa kune mikana yekukudziridzwa kwake kure kupfuura chero chinhu chaakange achizviona seanokwanisa kuedza kana kuwana.
Nekuda kwemifungo yakadaro, nzanga dzakawanda dzakaumbwa kuti dzidzidze uye kutsvagisa zvinhu zvepfungwa. Mamwe emagariro aya anodzidzisa uye anokurudzira kuvandudzwa kwehunyanzvi hwepfungwa. Vamwe vanoita bhizinesi rayo, uye vamwe vanopamba pakutenda kwevanhu nekunyepedzera kuve nazvo uye nekupa masimba emari nezivo izvo zvavasina.
Asi maitiro ezvemidzimu haangopiwi munharaunda dzakarongerwa chaizvo kudzidza uye kuita. Iyo psychic wave yakanganisa mitezo yechitendero sezvo ine avo vasingafarire zvechitendero. Muchokwadi, chinamato chinogara chichivimba neuchenjeri hwemweya uye maitiro emunhu nekuda kwesimba rayo uye simba pamusoro pepfungwa dzake. Kutevera dzidziso dzekutanga dzemumwe muvambi wechinamato nevamwe vake kwavakagadziridzwa yakaoma uye nekukurumidza mitemo nekutarisisa, zvinoiswa kuvanhu. Vatsigiri vechimwe chitendero kazhinji kazhinji vakasiya dzidziso yaro chaiyo kuti vawane vateveri, kuvaka chechi uye kuwedzera simba rekereke. Kuti vaite izvi vakasiya chikonzero uye vakadana kune psychic yemafungiro yemunhu. Vakatanga kumutsa chimiro chake chepfungwa uye vachipisa tsitsi dzake, ndokuzodzora nekuita nhapwa pfungwa. Zvakanyanya kuoma kudzora munhu nemaitiro ehungwaru. Pfungwa dzinogona kusamboitwa muranda nekukwezva kwechikonzero. Chitendero chinogara chichitonga munhu nekupodza chimiro chake chepamoyo.
Kana imwe yemweya yemweya ikatangwa pane kazhinji kacho tsika yevateveri vavo yekusagadzikana nehunhu hwepfungwa. Kana zviito zvakadaro zvikaiswa mukati mete nhengo dzomuviri idzi dzikakwaniswa mumuviri, mutsika nepfungwa kutanga maitiro, kukanganisa uye kuvhiringidzika uye zvimwe zviitiko zvakashata zvinoguma zvaitika. Zvingave zvakanaka kutaura mazwi mashoma nezvekuuya kwekuita kwepfungwa uye zvemweya zvishuvo zvino zvaonekwa.
Iyo psychic wave zvino ichipfuura nepasi rose yakatanga mune yekupedzisira yezana remakore rapfuura. Muchikamu cheimwe yeiyo New England States kwaive nemweya wekubuda nekubuda kwemweya uyo waitoita kunge unofambidzana nenzvimbo. Asi zvemidzimu inongova imwe yedanho rekupenga kwepfungwa. Iwo maitiro ezvepfungwa akanyatso kuvhurwa muNew York naAdam Blavatsky, avo vakaumba Theosophical Society, mu1875. Iyo Theosophical Society yakaumbwa naMadame Blavatsky sechinhu chinoshanda kuburikidza neiyo Theosophy yaifanira kupihwa nyika. Iyo Theosophical Society yaive hongu yakaumbwa nevarume nevakadzi vezera, nepo Theosophy ndihwo huchenjeri hwemazera. Kubudikidza neTheosophical Society yakaunzwa naMadam Blavatsky dzimwe dzidziso dze theosophical. Dzidziso idzi dzinoshanda kuzvidzidzo zvinofukidza huwandu hwese hwepfungwa uye zvakasvitswa kumatambudziko epasirese enyika asina kumbofungidzirwa. Izvo zvinoshanda kune zvakasarudzika zviitiko uye kune yakanaka uye yemweya zvishuwo uye zvinowanikwa. Nekudaro enigmatical munhu Madam Blavatsly anogona kunge akaoneka kune vamwe vanhu, dzidziso dzaakauya dzakakoshesa kufungisisa uye kufunga kwakanyanya.
Iyo nzanga dzakawanda ikozvino dzaita mune zvepfungwa nyaya, uye nekuvandudzwa kwepfungwa pamweya kwemunhu, vakagamuchira kurudziro yavo chaiyo kuburikidza neTheosophical Society. Iyo Theosophical Society yakaita kuti zvimiririre vamamwe madzinza uye zvitendero zviuye kuWestern world uye vape dzidziso dzavo dzakasiyana kuvanhu. Vanhu vekuMadokero vangadai vasina kushivirira kana kuteerera nzeve kune zvimwe zvitendero zvisiri zvavo, nekuda kweiyo dzidziso isingazivikanwe yeTheosophical, vanofarira uye vakagadzirira kufunga nezve chero chinhu kubva ku "vahedheni." Rudzi rwekumabvazuva rwakauya, vakawana kuterera kuWest. Kunyangwe kana kuri kwekuda kweWest kunoenderana nekutendeseka kwevadzidzisi vekuMabvazuva, kutendeseka mukuratidzwa kwedzidziso dzavo, uye nekuchena kwehupenyu.
Kutevera kufambiswa kwaAmai Blavatsky, iyo Theosophical Society yaive yenguva yakabviswa uye yakanyonganiswa ne izvo izvo ivo Madam Blavatsky vakaraira pamusoro pe: kupatsanura uye kuparadzanisa. Kunyangwe ipapo, kunyange Sosaiti yakakamurwa kupokana pachavo, dzidziso dzaive dzakafanana. Asi nekufamba kwenguva, dzimwe dzidziso dzinoshandurwa zvishoma. Nekuenderera mberi kupatsanurana, kwave zvakare nekubva kubva muhunyanzvi hwepfungwa uye hwekunamata toni nedzidziso uye tsika yekuita zvemidzimu. Iyo Theosophical Society haigone kusarudzika kumutemo: kana nhengo dzayo dzikaramba dzichisiya maitiro avo epfungwa, ivo, sekumwe kwemimwe miviri yakafanana munguva yakapfuura, vachadzora mutsika, nepfungwa uye nepanyama uye vachipera mukuzvidza nekuzvidzwa. Pane imwezve mukana wekuti: kana imwe yekufungidzira isimba remasimba masimba ikakwanisa kutonga imwe yazvino kugona Theosophical Sangano anogona nesimba nechido chake kushandisa dzidziso yehuchenjeri neshanduko dzakadai dzinogona kukodzera kugona kwake, uye, achitonga iwo muviri, achivaka kumusoro chechi kana masimba masimba. Maitiro akadaro angave asina kunaka kune vanhu sekuve masimba, kuburikidza neudzvinyiriri, hwaigona kubata uye kutonga nekuita nhapwa pfungwa dzemunhu kunyangwe zvitendero zvekare kana zvazvino zvavakaita. Iyo Theosophical Society yaita basa rakakura mukupa chikamu cheTheosophy kupasirese, asi zvingave zviri nani kuve nechero imwe yenharaunda dzayo dzakatsikiswa kubva pakurarama pane kuti iite kuti chero kana chimwe chikamu chayo chituke kuvanhu sekumisikidza inonzi inonzi Hiritirosi yemweya kubva pakati penhengo dzayo nekutadza kwevanhu uye zvikanganiso.
Mune mamwe mabudiriro, iwo, semuenzaniso, weGreece, Egypt, neIndia, vazivi venyeredzi vakave vanoshandiswa nevapirisita. Midzimu yavo yaishandiswa sezviridzwa, nekuda kwekuuka, kwekuwanikwa, mukurapa kwezvirwere uye nekutaurirana nemasimba asingaonekwe. Iwo mashura ezvebudiriro yedu akashandiswa zvinangwa zvakafanana, asi zvakanyanya kuve zvakashandiswa kune avo vanotsvaga kuziva, kuburitsa shungu, uye kugutsa zvishuwo zvakakura zvevavhimi vemuedzo uye vanoda kushamisika.
Asi maitiro ezvemweya mukudyarwa kwedu, kana akatendeukira kurudyi uye akadzora, anotibatsira kuvaka hubudirira hwakakura uye hukuru uye hukuru kupfuura chero hwepfuura. Nekune rimwe divi, zvemidzimu zvinogona kuita kuti tikurumidze kuparara uye nekuunza nhoroondo yedu kuvanokuda kwekunyepedzera mari, nerudo rwekunakirwa, kana nekugutsikana kwekunamata uye kunamatwa kwevakafa. Iyi budiriro inofanirwa kuve yakakura kupfuura vamwe nekuda kwehunhu hwemuviri wevanhu, kugona kwavo mamiriro, kugona kwavo kushandura mamiriro, kugona kwavo, kugona kwavo kubata uye kuita zvakanakira mamiriro ezvinhu, kuve kwavo vakaenzana nekukurumidzira, uye nhoroondo yesimba ravo rekutya uye basa repfungwa.
Kune izvo zvakashata, pamwe nezvakanakira, izvo zvinogona kukonzerwa nemafungiro ezvemweya uye kukura kwavo. Kunyangwe isu tichava nerubatsiro panzvimbo yekukuvara kubva mumafungiro emidzimu zvinoenderana pamunhu sezvazvinoita kurudzi. Izvo zvinopesvedzera izvo zvinokanganisa mimhanzi zvinobva kune anooneka uye asingaoneki apasi. Kuburikidza nepasi redu rinooneka pane vanogara vachiridza nekudyidzana masimba nemasimba enyika dzisingaoneki. Nyika yega yega, inooneka kana isingaoneki, ine mijaho yayo uye zvisikwa zvakasarudzika pachayo. Mitezo kubva kune isingaoneki yenyika inosangana nemunhu kuburikidza nehunyanzvi hwepfungwa, uye, maererano nehukama hwake hwepfungwa, izvo zvisingaonekwi nemafungiro uye masangano anozoshanda paari ndokumusimudzira kuita chiito. Zvisikwa uye masimba pari zvino asina kufuratirwa chiito pamurume kubudikidza neyemukati mepfungwa. Meso ake epfungwa uye kurira kwekufungidzira uye manzwiro akashamisika anowanzo kukonzerwa nekuvapo kwemasimba aya nezvisikwa. Kunyange munhu achiparadzaniswa kubva pakati pavo nekusaona kwemuviri, uye akavakirwa mukati nekuchengetedzwa nemuviri une hutano, akachengeteka, nekuti muviri wake wakanaka kwaari senhare. Asi dai madziro enhare akashayiwa simba, sezvingaitwa nemaitiro eupenzi, ipapo zvisikwa zvekufungidzira zveasingaoneki epasi zvichapfuura zvobva zvaita nhapwa naye. Simba rekutanga rezvisikwa richamuendesa kune ese ekunyanyisa uye haazokwanise kuramba chero kurwisa kwavo. Ivo vachamupedza simba rake, kumuita kuti asakwanisa kudzora muviri wake, kumuita muranda kuzvishuvo zvake, kuona muviri wake, uye kumukudza uye kumuderedza pazasi pechikara.
Mudanho razvino rekukura kwemurume akajairika, maitiro ezvemukati haana basa kwaari kunge whisky nezviridzwa zvemuchadenga kumuAmerican Indian. Kubatsira kwekuita kwepfungwa uye kugona kwepfungwa ndezvekuti ivo vanoita kuti vanhu vateerere kune zvakasikwa, uye vanomuisa mukunzwira tsitsi nemumwe wake. Ndo zviridzwa zvaanogona kushandisa kuona mukati nekunzwisisa zvakadzama zvakasikwa uye nezvese zvakasikwa zviitiko. Hukuru hwemweya, kana hwakanyatsodzidziswa, huchagonesa murume kuve nekunyatso shandura nekuvandudza muviri wake, nekuwutonga. Huchenjeri, kana huchidzorwa uye hwakabatanidzwa, huchagonesa munhu kuunza munyika yepanyika hupfumi hwaanogona kuunganidza kubva pasingaonekwe nyika, kuunza muhupenyu hwenyama zvese zvinoshuvira uye mafomu akakodzera akachengetwa munyika yekufunga, iyo nyika yepfungwa, uye kugadzira nyika yepanyama yakagadzirira zivo kubva pasirepamweya.
Iko kuita kweavo vanofarira psychics uye psychic development ndeyekusiya kufunga kana kuita kwavo kwekufunga hunhu kune humwari hunyanzvi hwepfungwa uye nyika dzinovavhurira ivo. Uku kusiiwa kwechikonzero kamwe chete hakukodzeri kufambira mberi. Kugadzira masimba ayo ari manyowani, anobatsira, mashandisiro avo anofanirwa kunzwisiswa nekutarisirwa kuiswa, kudzamara hunyanzvi huchizivikanwa uye huchiiswa pasi pehutongi hwekufunga. Chikonzero hachifanirwe kusiiwa zvachose.
Vanhu venyika dzekuMadokero, kunyanya muUnited States, vacharamba vachikudziridza maitiro epfungwa, asi ivo vanofanirwa kukoshesa uye nekunzwisisa kuri nani mashandisirwo uye zvisizvo zvehunhu hwepfungwa nekusimudzira kwavo, pane kuti panguva ino vabvumire hunhu hwavo hwepfungwa kuratidza uye kumhanya mhirizhonga.
Mumamiriro ezvinhu aripo, munhu akagwinya munhuwo zvake ane muviri-wesero-muviri (♎︎) akasunganidzwa nechero huremu-muviri wake (♍︎) - musimboti wekuumbwa kwechimiro iyo minwe yemuviri yakavakirwa.
Iyoyo general make-up nemaitiro epfungwa anowanzo kuve akasiyana neaya emurume akagwinya murume. Chipoko ndechimwe chakavezwa nechero molecule yemuviri masero, uye fomu rechisumbu, nekuda kwekubatana kwayo nemasisitimu epanyama, inonyanya kukanganiswa nemafungiro epasirese inoenderana nechimiro chayo.
Kune vekuzvarwa-vekuzvarwa vemasvikiro nemafizikiki vanova vakadaro nekukura. Psychics vanozvarwa vakadaro, nekuda kwemamiriro epanyama uye epfungwa evabereki vavo kana mamiriro akajairika aripo uye panguva yekuzvarwa. Vese vane psychic maitiro vanofanirwa kujairana nehuchenjeri nezvehupi hwemweya vasati vaedza maitiro ezvepfungwa. Nzira dzakanakisa dzekurwisa njodzi dzedzidziso ndeyekudzidza uzivi uye kurarama kwehupenyu hwakachena.
Avo vasina kuberekwa vemashura vanogona kukudziridza chisikwa chepanyama uye vova vanoita zvemidzimu nekurega kuda kwavo uye nokuva vasina kunaka uye kupa nzira kune zvese zvinosimudzira zvavanonzwa, kana nekushaya simba nekuputsa simba rinopesana nemuviri wemhuka kuburikidza nechikafu chemiriwo. Idzi ndidzo dzisingarerutsi dzepfungwa. Asi zvipoko zvepamoyo zvinogona kuvandudzwa nekutungamira zviito zve munhu maererano nechikonzero, nekudzora kwekuda kwemukati zvechido nezvishuvo, nekuita kwemamwe mabasa, kana nekusimudzirwa kwepfungwa kuburikidza nekudzora mabasa ayo. Kana iyo yekupedzisira kosi ikateverwa, mweya yekumusoro inokudziridza sezvazviri semuti unobereka mashizha, mabukira, maruva nemichero mumwaka wakakodzera. Idzi ndidzo dzidzo dzakadzidziswa. Kune vashoma kwazvo.
Iko kugadzira kwe psychic kwakafanana neyekareidoscope. Muviri wenyama wakaita senge casing kana sheath, iwo-mazhinji-mativi mativi mukati semanzwiro ari mukushandisa; zvinhu zvisina ruvara uye zvisina ruvara zvinowira pamusoro pegirazi panguva dzese dzechiitiko sekufunga uye zvishuvo zvinokandwa uye zvinoratidzwa pagirazi kana mune nyota yemuviri, ziso iro maitiro anoonekwa rakafanana nepfungwa iri mumuviri, uye kungwara kunosarura pazvinhu zvinoonekwa zvakaita somurume chaiye. Sekusiyana-siyana kwakaita maididopopu, saiwo mashiripiti akasarudzika mumhando yawo uye sevanhu vanobata kareidoscope vakasiyana, ndozvinoita nevaya vanoshandisa chimiro chavo chepfungwa.
Mazwi ekuti "psychic," "psychism" uye "psychology" anoshandiswa kazhinji, asi misiyano haina kudhonzwa zvakapinza sezvaanofanira kuve. Izwi rekuti psychic rinobva pashoko reChigiriki rekuti Psyche, musikana akanaka anofa, mweya wemunhu, uyo akatarisana nemiedzo mizhinji nematambudziko, asi pakupedzisira akazove chisinga peri nekubatana muwanano naEros. Psyche itself inoreva mweya, uye mazwi ese ane chinoenderana neizvi ane chekuita nemweya; nekudaro psychology ndiyo yemweya. Asi Psychology sekushandiswa kwazvakaita nhasi kune zvakawanda nezvekuita kwekutya kwemuviri wehunhu pane kune mweya chaiyo. Psychology sainzi yemweya, kana sainzi yemweya.
Mune imwe pfungwa, zvisinei, uye zvinoenderana nengano yechiGreek, Psyche mune murume ndiye astral molekyuli-muviri, kana dhizaini yekuumbwa fomu (linga-sharira). Psyche akanzi anofa nekuti mweya wemuastral yemuviri unongogara chero bedzi uine muviri wenyama, mumwe wake. Ivo baba, futi, vaPsyche vaive vafa nekuti sevanhu vekare hunhu zvakare hwaive hwekufa. Iyo yemasero mole mole yemuenzaniso yehupenyu hwazvino huwandu hwakazara uye mhedzisiro yemifungo muhupenyu hwakatangira-mupfungwa imwecheteyo kuti muhupenyu hwazvino izvo zvido nemifungo iri kuvakira hupenyu hwake hunotevera iye wemuhedhi fomu remamoleky, zvinoenderana neiko kana chinhu chake chaakaumba chichaumbwa. Psyche anodiwa naEros, iro zita rinoshandiswa mune dzakasiyana manzwiro. Eros uyo anotanga kuda Psyche ndiyo musimboti wechido icho, chisingaonekwe nePsyche, chinobatana naye. Psyche iyo astral yemuviri muviri we fomu ndiyo muviri kubudikidza neayo zvese zvinonzwa zvinowanikwa sekunakidzwa uye kurwadziwa kwemanzwiro; ndiye anopa kufadza kuchiva. Asi senge fomu inofa, inofa. Kana, zvakadaro, Psyche, iyo yemastral moleyumu muviri wechimiro, mweya unofa, uchigona kubudirira kupfuura mukati medzimwe nguva dzakaoma nemiedzo yakamisikidzwa pairi, inopfuura nepamamorphosis yakafanana neya Psyche nechiratidzo chake, butter butter, uye ari inoshandurwa kuve chinhu chakasiyana, kubva pane chinofa chisingafi. Izvi zvinoitika apo iyo astral yemuviri yemuviri fomu ichichinjwa kubva kune yekufiwa yechinguvana kuita kusafa zvachose; saka haichazotongerwi rufu, nekuti yakura kubva muura hwemuviri wenyama. Eros dzimwe nguva inoshandiswa kurongedza chikamu icho chepfungwa repamusoro, yehunyanzvi, iyo inopinda mumuviri wemuastral yemuenzaniso (iyo linga-sharira) uye iri mumuviri mumuviri wenyama. Izvo zvinofanirwa nerudo rwepfungwa nekuda kwechimiro chayo chinofa, Psyche, mumuviri wenyama, kuti Psyche, iwo mweya wemunhu, pakupedzisira unoponeswa, kumutswa kubva kuvakafa uye nekuita kusafa nekubatana pamwe nepfungwa. Iko kushandiswa kwakasiyana kwakagadzirwa nemazita Psyche naEros uye chakavanzika chehukama hwaEros kuna Psyche, mweya wemufi wemunhu, zvichanzwisiswa zvakanyanya sezvo munhu achijairana nekwavo uye nekudzidza kusiyanisa uye kurondedzera nzvimbo dzakasiyana zvikamu nenheyo zvinomuita iye kuomesa zvaari. Kuongororwa kwepfungwa kucharatidza kumurume kuti akagadzirwa neVazhinji Psyches, kana mweya.
Kune marudzi mana eanopfungwa: iyo yemuviri psychic, yezvemweya psychic, yepfungwa psychic, uye yemweya psychic, sekumiririrwa mudenga reZodiac nezviratidzo zvakafanira libra, (♎︎) virgo-scorpio, (♍︎-♏︎), leo-sagittary, (♌︎-- ♐︎), kenza-capricorn (♋︎-♑︎). Aya marudzi mana anoratidzwa uye akatsanangurwa mukati The Word, Vol. 6, Kwete. 3, mapeji 4-7. Mune dzakasiyana-siyana zodiacs mukati meiyo yakazara zodiac, imwe neimwe zodiac inomiririra murume.
Mumwe anogona kukudziridza hutano hwake hwepanyama (libra, ♎︎) nekuputsa hutano hwake, nechikafu chisina kukodzera, nekutsanya, nekurwara zvisizvo uye kushungurudzwa kwemuviri, sekutora doro, nezvinodhaka, nekurwadzisa kurwadziwa, neusterities. nekunyara, kana nekunyanyisa kuda zvepabonde.
Iyo astral psychic yemhando (virgo-scorpio, ♍︎-♏︎) inogona kuvandudzwa nekutarisa yakatsiga panzvimbo yakajeka, kana nekugara wega murima mune iripo mamiriro epfungwa, kana nekudzvanya maziso uye kuteedzera mavara anoonekwa, kana nekurapa kwemagineti, kana nekubatwa zvisina kufanira, kana nekupiswa kweimwe rusenzi, kana kushandisa bhodhi reOsjaja, kana kuenda kumisangano yekuita zvemidzimu, kana nekudzokorora uye kurira kwemamwe mazwi, kana nekufungidzira kwekumira kwepanyama, kana kufema, kufema uye kuchengetedza mweya.
Iyo yepfungwa psychic yemhando (leo-sagittary, ♌︎-♐︎), inofanirwa kuvandudzwa nemaitiro epfungwa, sekugadzira maficha epfungwa, nekupa mafomu epfungwa kune mavara epfungwa, uye nekudzora mabasa ese epfungwa kuburikidza nekufungisisa.
Iko kusimudzira kweomweya wemweya psychic (cancer-capricorn, ♋︎-♑︎) inounzwa nekudzora kwemabasa epfungwa kana munhu achikwanisa kuzvizivisa munyika yemweya yeruzivo, mairi mamwe mativi ese echikamu. zvemidzimu zvakasikwa zvinonzwisisika.
Kusvikira, masimba kana hunyanzvi hwakagadziridzwa nemasangano anoteedzana epfungwa idzi:
Kutanga: kudavirwa uye kuitirwa kwevakadzi pamwe nemweya vepamweya, kana kusangana kwakabatwa neichobere chaiko kana kufambisa, kana kucherechedzwa kwemuviri kwechimwe chinhu chinoshamisa.
Chechipiri: kukudziridzwa kwe clairvoyance kana clairaudience, sengemukati svikiro, kana sosi yepakati, kana svikiro repakati, kana somnambulism.
Yetatu: hunyanzvi hwekuona kwechipiri, kana psychometry, kana telepathy, kana kushopera, kana kufara, kana fungidziro ine simba — iyo yekuvaka chifananidzo.
Chechina: kuwana zivo, kana chimiro chechiporofita, kana simba rekugadzira zvine hungwaru-iro simba rekuda.